मदन भण्डारीकी छोरी उषाले दासढुङगा हत्याकाण्डबारे के भनिन् ? (भिडियो) « Deshko News
मदन भण्डारीकी छोरी उषाले दासढुङगा हत्याकाण्डबारे के भनिन् ? (भिडियो)
काठमाडौं । स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीकी जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारीले आफ्नो बुवाको हत्याकाण्डबारे नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । स्वर्गीय भण्डारीको २६ औं स्मृति दिवसका अवसरमा प्राईम टाईम्स टेलिभिजनका लागि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलाले शुक्रबार राति विशेष कुराकानी गरेका थिए । सोही, टक शोमा भण्डारीकी जेठी छोरी उषाकिरणले उक्त हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढिरहेको जनाएकी छिन् ।
उनले आफ्नो बुवाको रहस्यमयी तवरले हत्या नै भएको आफूहरुको बुझाई रहेको दाबी गरिन् । उनले हत्याकाण्डबारे २०५० सालदेखि नै अर्थात सुरुवातदेखि नै अनुशन्धानका कुराहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने बताईन् । आफ्नो बुवाको हत्यारा पत्ता लगाउने कोशिस जारी रहेको उनको विश्वास छ । उनले भनिन्,”कतिपय कुरा बाहिर आउँछन् । कतिपय कुरा भित्रै रहन्छ ।”
उनले बुवाको हत्याबारे त्यतिवेला नै कतिपय प्रमाणहरु मेटाउने काम भएको आशंका समेत गरिन् । फरक प्रसँगमा उनले आफ्नी आमा अर्थात राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्थाप्रति सम्मान गर्दै आफ्नो शतप्रतिशत योगदान दिएर न्याय नै गरेको पनि विश्वास व्यक्त गरिन् ।
पत्रकार पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण : विशेष अनुसन्धान ब्यूरोको टोली चितवनमा
भरतपुर । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन काठमाडौँबाट प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोली
सांसद सूर्यनारायण यादवले राजीनामा फिर्ता लिए
काठमाडौँ, भदौँ १ प्रतिनिधिसभाका सांसद डा सूर्यनारायण यादवले पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिएका छन्। पाठकले
आँखा चिम्लेर रवि लामिछानेको पक्षमा लाग्ने युवक जाने भए पाँच वर्ष जेल !
काठमाडौं, १ भदौ– विवादित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेका एक उग्र समर्थकलाई प्रहरीले साइबर अपराधमा
बोक्सीको आरोप लगाउँदै ३५ वर्षीया महिलालाई मलमूत्र खुवाइयो
जलेश्वर, भदौँ १ महोत्तरीमा एक ३५ वर्षीया महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै मानव मलमूत्र खुवाएको छ।
नेकपामा माधव नेपालको तेश्रो बरियता खोसियो
काठमाडौं, भदौँ १ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले तेस्रो बरियतामा नेता झलनाथ खनाललाई बनाएको